Wekutanga kuburitswa mumiriri weLinux kernel 4.11 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Takaburitsa svondo rino nenhau dzinonakidza dzevashandisi veGnu / Linux uye kwete inonakidza kwazvo kune vanogadzira sezvo inosanganisira basa rakawanda. Nhau dzinouya kubva kuKernel.org, iyo webhusaiti yakagadzirwa naLinus Torvalds kushambadza iwo mavhezheni uye kugadzirisa kweiyo kernel.
Chokwadi, isu tatova neyekuvandudza vhezheni yekernel, mune ino kesi isu tinotaura nezve kernel 4.11, iyo inotevera kernel vhezheni iyo inotarisirwa kuburitswa mukupera kwaApril, ndiko kuti mukati memwedzi miviri.
Parizvino, chii yakaburitswa kwave kuri kuburitswa mukwikwidzi vhezheni ye kernel 4.11. Iyi vhezheni ichave yekutanga yeasere ese mavhezheni ayo achazoburitswa mumazuva ano. Mushure meizvi, musi waApril 8, iyo yekupedzisira vhezheni ichaburitswa, kunyangwe izvi zvisati zvaitika, vashandisi vachaziva kernel 23, vhezheni iyo mazuva mashoma apfuura yakaburitswa nenzira yakagadzikana kune wese munhu uye iyo inogona kusvika kune yakawanda Gnu / kugovera .Linux kupfuura ino yemberi vhezheni yeLinux.
Kernel 4.11 ichaumbwa nevasere vanoburitswa
En webhu Kernel.org Isu tatova nemumiriri wekuburitswa weKernel 4.11 aripo, vhezheni yatinogona kurodha pasi, kuumbiridza uye nekuisa mune chero kugoverwa. Kunyangwe izvi zvisingakurudzirwe kuti zviitwe mukugovera kana timu yekugadzira, nekuti kunyangwe iri mukana wekuburitsa, vhezheni yacho haina kugadzikana uye sezvo iri kernel, isu tinogona kuve nedambudziko rakakomba pane timu yekugadzira kana isu tikamisa iyi vhezheni. Kune rimwe divi, kana iwe uri mugadziri kana uine testbed timu, iyi vhezheni yeLinux kernel yakanakira iyo.
Chero zvazvingaitika, ichi chikamu chekugovera chinofanira kuvandudzwa nekuti hachingogadzirise zvipembenene zvinonetsa zvakawanikwa asi zvakare zvinopa chokwadi kuwedzerwa kuenderana ne new hardware kana huripo huripo asi haitsigire zvakakwana. Ndokunge, nekukurumidza kana gare gare tichava neiyi nucleus kana zvinotevera mukugovera kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yekutanga Linux kernel 4.11 yekuburitsa mukwikwidzi yave kuwanikwa